United Kingdom - ezweni othanda futhi ehlonipha namasiko alo. Sekungamakhulu amaningi eminyaka, isimo ibuswa amakhosi nezindlovukazi. Ngaphezu kwalokho, amakhosi ohlanga British kubhekwa ethandwa kakhulu emhlabeni. Ngaleso sikhathi samanje sobukhosi kuyinto Elizabeth II - iningi nkosi abadala, oseke matasa sobukhosi. Ibhekene Charles wakhe, iPrince of Wales, ogama biography okuzokhulunywa ngazo kulesi sihloko.
Charles, iPrince of Wales, wazalwa ngo-1948 emndenini Princess Elizabeth (Queen esizayo) nomyeni wakhe uPhilip, uMbusi Edinburgh. WayeyiZwi wenkosi George VI, futhi ngisho nangalesosikhathi kwathiwa bazitshela ukuthi ngolunye usuku uyothatha isihlalo sobukhosi UCharles III (ngokwesiko e amakhosi isiRashiya, negama Charles, abizwa ngokuthi, ngendlela isiJalimane, Carl).
Ngokwe-Umlando kaCharles wakhula ke ayengayisebenzisa kuyothiwa bayajabula. Umfana wahlushwa ukuntula ukunakekela unina, owaba indlovukazi lapho eneminyaka engu-3 ubudala. Charles ngokuvamile kwesokunxele inakekelwa nannies, egijima ugogo wakhe. Kusukela kuyise, Prince futhi wathola hhayi eziningi uthando. Kusukela ebuntwaneni eseyingane namahloni, ukukhala njalo futhi ikhononda. Duke wehluleka lezi zimfanelo, kaningi wagxeka indodana yakhe. Njengoba zikhula, Charles wayithi mfowethu nangokuthi dadewethu. Ngo-1950, UPrincess Anne wazalwa ngo- 1960 - Kunyatheliswa Endryu, kwathi ngo-1964 kwazalwa Prince Edward.
Njengazo zonke izingane asebukhosini, kuze iminyaka 8 isikhulu ubudala wafundiswa ekhaya, ukufundela othisha yangasese ezindongeni Buckingham Palace. Kodwa lapho Charles wayeneminyaka engamashumi 8 ubudala, abazali bakhe zanquma ukubathumela indodana yakhe esikoleni samabanga aphakeme e-London. Lo mcimbi okwasusa esinamathambo emphakathini, ngoba isikhulu waba indlalifa ngowokuqala umqhele British, owaya esikoleni esivamile. Ngalesi sikhathi, i-Charles namahloni wahlupheka ekuhlaseleni izintatheli ababekhuphuke naye kuyo yonke indawo. Wakhe umama, i-Queen, ngisho wanxusa letihlelekile naletingakahleleki bacelwa ukuba bashiye indodana yakhe yedwa.
Prince wabuye waqeqesha eScotland, esikoleni wokulungiselela Gordonstaun, lapho afundela khona phambi kukayise. Kukhethwa le isikhungo akakwazi ngokuthi yimpumelelo. Charles wawukubangela usizi, uxhashazwa efunda nabo.
Ngemva imfundo yesibili, Charles, iPrince of Wales, wafika e-Cambridge - nyuvesi yodumo kanye endala eNgilandi. Lapha wafundiswa umlando, nemvelo, ubungcweti. Ngo-1970 wathola iziqu University futhi wathola iziqu ze-Bachelor of Arts. Kamuva, ngokwesiko yena yanikezelwa njengoba Master of Arts. Waqhubeka nezifundo zakhe e-Australia, futhi imfundo wezempi e-Naval College ngesikhathi Dartmouth. Kusolwa ukuthi ngemva ukubusa eziya esihlalweni sobukhosi, yena ayembheka njengenkosi amaningi afundile wake wabusa eBrithani.
Kunyatheliswa Charlz futhi Princess Diana
Indlalifa yesihlalo sobukhosi akukwazi ngokuthi iyinhle, kodwa, naphezu kwalokhu, iqhawe lethu wajabulela ukunakwa abesifazane. Charles, iPrince of Wales, ogama ukukhula safinyelela cishe 180 cm, yayakhiwe kahle, ayenakho i ukubukeka ahlukile. Isithombe spoilt kuphela ophumile izindlebe, kodwa Ububi Prince ngokusula kwesokuba ngokuhamba kwesikhathi.
Amanoveli kaCharles bekulokhu ekulalelweni, ngokuba kwakunguye owayehola ekukhulumeni indlalifa yesihlalo sobukhosi. Wayelethwa neosmotritelen izixhumanisi ukuthi eziningi spoilt kwesithunzi nokuhlonipheka kwakhe. Nge Diana Spencer, unkosikazi wakhe wesikhathi esizayo, lapho ahlangana khona ngo-1980, lapho ehlangana nodadewabo uSara. Ngaphambi behlangana, yena yayisivele uhlela umshado ukuba Amanda Natchbul, indodakazi zokugcina Iphini umbusi India, kodwa yena enqaba sipho.
Wedding Diana labetibambile ngemva konyaka bahlangana - ngo-1981. Nokho, umshado okungazelelwe ayilethi injabulo. Zisuka nje, babeqhubeka wabalwela abezindaba ukuzwelwa. Ngokusho amahlebezi, ngisho nangaphambi Kunyatheliswa umshado Charlz ushintshe umakoti ne elidumile Lady Camilla. Ngemva konyaka imibhangqwana lomshado ingane yokuqala ezalwa - Kunyatheliswa Uilyam, futhi ngo-1984 - Kunyatheliswa Garri. Nokho, izingane Akumsindisanga umndeni. Charles uya ukulahlekelwa udumo, kuyilapho umhlaba wonke yadabuka Princess Diana.
Kakade kusukela ngo-1992 abashadayo waqala ukuhlala ngokuhlukana. Isehlukaniso senzeka ngo-1996, futhi ngemva konyaka Princess of Wales zafa kabuhlungu engozini yemoto e-France. Asebukhosini ezimpini umngcwabo UDiana. Amadodana balandela lomngcwabo kanina, kanye Charles, iPrince of Wales. Izithombe kusukela yokungcwaba inkosazana othandekayo lasakazeka ezweni lonke ngokushesha.
Washada Diana Spencer Charles, iPrince of Wales, wazala amadodana amabili.
Senior - Kunyatheliswa Uilyam, uMbusi Cambridge. Umsolwa kulindeleke ukuthatha isihlalo sobukhosi Britain kokushona kukagogo wakhe, nokho uyise. Kusukela 2011, washada ukuba Ketrin Middlton, Duchess of Cambridge. Laba bobabili wanika INkosana uCharles nabazukulu ababili: Prince George futhi Princess Charlotte. Le ntombazane yethiwa kumkhulu wakhe uthweswe umqhele. Igama lakhe - ukushintshashintsha lensikazi igama Charles.
Indodana encane - Kunyatheliswa Genri of Wales. Ungashadile, akukho zingane. Kuyinto onamileyo onesimo futhi ephezulu iphrofayela zothando nabesifazane abadumile abadumile kulo lonke elaseBrithani.
Ukuba ibuye emshadweni wayo wesibili ku- Camilla Parker Bowles hero indaba yethu alinaso izingane.
unkosikazi wesibili - Camilla Parker Bowles
Ngokusho amahlebezi, Charles, iPrince of Wales, futhi Camilla wayelokhu exhumana ngisho nangaphambi kokuba ahlangane indlalifa Princess Diana. Kodwa-ke unina ayimvumelanga ukuhlanganisa emshadweni owesifazane lwesikhundla ezingabazisayo. Ngisho ngaphambi kokuba ashade ukuze Parker iphoyisa ukuthi ubekade ubuhlobo nomunye umuntu, okuyinto ngalezo zinsuku lwalungamukelekile ngowesifazane kamuva ababeyoba Queen.
Kuyinto ubuhlobo uCharles Camilla sezishiye isehlukaniso Princess Diana. Umbhangqwana oshadile nje ngo-2005. Ngokokuqala ngqá emlandweni kwamakhosi British, umshado owawusenkundleni ethile inqubo civil. Ngemva komshado, Camilla waba Princess of Wales kanye Duchess of Cornish. Nokho, ngenxa yenhlonipho kuya Diana oshonile, uzama ingasaphathwa e zomphakathi isihloko Princess.
Charles, iPrince of Wales, imatasa nemisebenzi yezenhlalakahle. In the 70s, waze Nokho amangalelwe isihloko Iphini umbusi Australia, ngenxa crisis monarchical waphoqeleka ukuba ayiyeke le umqondo. Ibonisa uthando esikhethekile sokusiza abantulayo, njengoba ukusekelwa izinhlangano ezingaphezu kuka-300. Nguye owasungula lakhe "Foundation Prince", ekubhekaneni nezinkinga zemvelo, ukuntuleka kwemisebenzi, kwezamabhizinisi, ezempilo kanye nezolimo. Minyaka yonke, Prince uphatha ukukhulisa amakhilogremu ayizigidi ezingu-100 e iminikelo.
INkosana uCharles ngokuvamile liyakulahla umphakathi ngenxa ngokuphumelelayo nezinkinga zomshado ochithekile ukuba uDiana Spencer. Nokho, ukuntuleka kothando kwabantu akuvimbeli ukuba bahlanganyele izindaba zomphakathi, echitha isikhathi esiningi emisebenzini esiza abantulayo bese behlala ngenjabulo ukuphila ngishade owesifazane loya mfana uyakuthanda ngempela. Kunethemba lokuthi kuyoba umbusi omuhle, njengoba unina - uQueen Elizabeth II.
Danil Pluzhnikov: Biography of the winner yephrojekthi "Izwi Izingane."
Sebenzisa ama-gazelle: kungakanani okunenzuzo?